Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး UK နိုင်ငံရောက် မြန်မာကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး UK နိုင်ငံရောက် မြန်မာကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိူးသိမ်းကြီးသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ၂၀-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၃-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သော World Edcuation Forum သို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ လန်ဒန်မြို့၌ ရှိစဉ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာယရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး The Rt. Hon. Mr. Mark Field အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနများ၊ တက္ကသိုလ်များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဗြိတိန်ရောက်မြန်မာ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် ၂၀-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် လန်ဒန်မြို့၊ မြန်မာသံရုံး၌တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။